Tanora tsy tara – Mandritra ny fialan-tsasatra : maro isafidianana ny fialamboly azo atao… (NewsMada) | AEMW
Tanora tsy tara – Mandritra ny fialan-tsasatra : maro isafidianana ny fialamboly azo atao… (NewsMada)
Efa tafiditra tanteraka ao anaty fialan-tsasatra ny rehetra, ankehitriny. Efa vita ihany koa ny fanalana azy noho ny fanadinana natrehina. Roso ary ny dia ho amin’ny fialamboly sy ala vonkina. Mafy ihany iny taom-pianarana iny ka mila izany ny rehetra. Tsy tara amin’ny filalaovana « playstation » raha ny tanora, hatramin’ny ankizy aza. Maharaka ny hiaka farany amin’izany mihitsy ny ankamaroany. Fantaro anefa, tsara ny maharaka, amin’ny maha tanora tsy tara antsika, fa mila lanjalanjaina ny fotoana ilalaovana. Ankoatra ny havizanan’ny maso, lany ny andro tokony hanaovana zavatra hafa, raha tsy voafehy izany.
Maro koa anie ny zavatra azo atao sy ialana voly e! Ho an’ireo manan-katoraka, mivoaka kely ny toerana misy azy hiala sasatra. Tsy voatery ho any amoron-dranomasina foana anefa izany. Ho an’ny tsy manana fahafaha-manao na raikitra amin-javatra hafa, ny fahaizana miaina amin’ny zava-misy dia ampy hanala hamohamo. « Ny fahaizana mankafy ny tontolo manodidina anao no hahazoana fahafinaretana sy filaminan-tsaina », hoy izay mpandinika iray izay.
Fa ankoatra izay, anisan’ny lalao sady fialamboly tsara koa ny kilalao nentim-paharazana. Misy, ohatra, ny hetsika fanandratana ny fanorona, atao etsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina. Mba ho tanora tsy tara amin’ny an’ny tena, tsara ny mitsidika ny toy ireny. Afaka mifaninana izay efa mahay, ary misy mampianatra izay mbola manavao. Ny fialamboly, tonga lafatra, ny fahalalana hitombo ary ny kolontsaina maha malagasy, mivoitra. Tsy tara amin’izany isika tanora.
← Indray mijery (NewsMada)
«Festival Kanetibe 2016» : nahitana talenta vaovao ny fihaonana (NewsMada) →